Dib Ugu Laabashada Dugsiga Sare ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Maaddaama ay sii kordhayaan kiisaska COVID ee Minnetonka iyo bulshooyinka ku xeeran, iyo caqabadaha ka jira xagga shaqaaleynta karantiillada iyo jirrooyinka ku soo boodaya meel ka baxsan iskuulka, Degmadu waxay u gudubtay barashada elektaroonigga ah oo dhammaystiran illaa ay wax ka hagaagayaan.
Hoggaanka degmadu waxay la socdaan xaaladda waxayna waalidiinta siin doonaan ogeysiis badan intii suurtagal ah haddii taariikhdaas ay u baahan tahay in la beddelo.
Eeg qaabka waxbarida elektaroonigga ah
Waa maxay qaab dhismeedka barashada elektaroonigga ah?
Fasal kasta oo waxbarashadda elektiroonigga ah wuxuu noqon doonaa 90 daqiiqo. Qaab dhismeedka xilli kastaa wuxuu ka koobnaan doonaa furitaan rasmi ah bilowga muddada iyo xiritaanka dhammaadka muddada, iyada oo loo marayo kulan toos ah oo toos ah. Dhammaan muddada, fasalladu waxay noqon doonaan kuwo is-dhexgala oo is-dhexgal sameeya, iyadoo laga faa'iideysanayo istaraatiijiyado sida wada-hadal kooxeedyo yar yar, tilmaam toos ah, su'aalo toos ah iyo cod-bixinno, iyo aalado tiknoolajiyadeed oo iskaashi ah oo ay dhammaan ardayda wadaagi karaan isla markaana dhisi karaan aqoon wadajir ah. Xeelado kala duwan iyo aaladaha teknolojiyadda ayaa loo isticmaali doonaa si loo hubiyo ikhtiyaariyada dhammaan codadka ardayda in la maqlo.
Rajooyinkani waxay noqon doonaan kuwo iswaafaqsan dhammaan macallimiinta / fasallada. Sidaad filan laheyd oo aad rajeyn lahayd, ardayda waxaa loo xilsaari doonaa shaqo ka baxsan fasalka. Rajooyinka imaatinka joogtada ah ayaa jiri doona iyo habraaca dabagalka. Horumarka ardayda si dhow ayaa loola socon doonaa. Kooxdayada Taakulaynta Ardayda waxay si taxaddar leh ula socon doontaa horumarka ardayda si loo hubiyo wixii taageero iyo waxqabadyo ah inay u dhacaan si habboon waqtigeeda si ay ardaydu u helaan waxay u baahan yihiin si loogu guuleysto.
Sidee ayaa nidaamyada fasalka, rajooyinka iyo waxqabadyada loo horumarin doonaa?
Maaddaama aan hadda bilaabeyno sanad cusub, muhiimadda weyn ayaa la saari doonaa sidii loo dhisi lahaa bulshada dhexdeeda fasal adag oo ay hagayaan qiyamka iyo xeerarka aasaasiga ah ee dugsigeennu. Dhisida dareenka xoogan ee lahaanshaha xiriirka ayaa udub dhexaad u ah shaqadeena - gaar ahaan inta lagu jiro waqtigan elektaroonigga ah. Si loo hubiyo in shaqada fasalku ay tahay mid is dhexgal ah, ardayda waxaa laga filayaa inay kaamirooyinkooda ku xirnaadaan inta lagu jiro mudada-waxaan soo jeedinayaa in si fudud ay ku hor jiraan darbi maran. Markay ardaydu isu diyaarinayaan sanadka, waxaan ku dhiirrigelinayaa inay guryahooda ka helaan meel ay hoy u ahaadaan dugsiga. Deyrtan dambe, Google Meet waxay lahaan doontaa ikhtiyaar gadaal ah.
Marka ay bilaabaan sanadka, macalimiinta ayaa la wadaagi doona, lana shaqeyn doona ardaydooda si ay u horumariyaan, caadooyinka fasalka iyo waxyaabaha laga filayo kaqeybgalka waxqabadka iyo filashooyinka. Xeerarkan waxaa hagaya MHS Norms Student waxayna dabooli doonaan mowduucyo kala duwan sida adeegsiga Google Meets (oo ay ku jiraan isticmaalka sheekaysiga, kamaradda, iyo makarafoonka)
Inta lagu guda jiro dayrta, waxaa jiri doona fursad dhammaan daneeyayaasha (ardayda, shaqaalaha, iyo waalidiinta) si ay uga bixiyaan ra'yi-celin ku saabsan horumarkayaga.
Isniinta, Talaadada, Khamiista, iyo Jimcaha, ardayda waxay kaqeyb qaadan doonaan sedex fasal iyadoo la raacayo jadwalka waxbarasho ee maalinlaha ah. Waxaa jiri doona maalin A iyo B. Waqtiga fasalka, ardayda waxaa laga rajeynayaa inay galaan shirarkooda iskuxirnaanta ee fasal kasta oo jadwalka loo qoondeeyay. Ardayda aan soo galin inta lagu jiro shirarka isku dhafka ah waxaa loo calaamadin doonaa maqnaansho. Arbacada, dhammaan lixda fasal waa la kulmi doonaa.
Jadwalka cusub ee xannibaadda laga bilaabo Diseembar 1, waxaa jira afar fursadood usbuucii oo loogu talagalay MAST laga bilaabo 9: 30-10: 10 am Kuwaani waxay dhici doonaan Isniinta, Talaadada, Khamiista, iyo Jimcaha.
Ardayda waxay farriin cilmiyaysan ka heli doonaan macallinkooda haddii loo qoondeeyo inay kulmaan inta lagu jiro muddadaas. Haddii ay dhacdo in ardaygu uu helo casuumaado badan maalin gaar ah, waxaan ku dhiirrigelinaynaa inay la xiriiraan macallimiintooda si ay u dejiyaan qorshe ay kula shaqeeyaan macallin kasta.
Haa. Waxaa jira jadwal maalinle ah oo leh 3 fasal maalintii. Inta lagu jiro waqtigan, waa inuu jiraa is dhexgal macallin / fasal iyada oo loo marayo Schoology, Google Hangout, iyo / ama guddiyada wada hadalka.
Ardaydu waxay ku jiri doonaan fasal kasta 90 daqiiqo oo ku saleysan jadwalka kulanka, iyo 40-50 daqiiqo oo ka mid ah waxay noqon doontaa waxbarid toos ah. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay hubiyaan Schoology maalin kasta wixii macluumaad ah ee ku saabsan koorso kasta. Macalimiintu waxay u soo gudbin doonaan waxyaabaha laga filayo casharka maalin kasta.